Ciidanka Dowladda Iyo Al-Shabaab Oo Ku Dagaalamay Shabeellaha Hoose -News and information about Somalia
Home Warkii Ciidanka Dowladda Iyo Al-Shabaab Oo Ku Dagaalamay Shabeellaha Hoose
Wararka aan ka heleyno Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan, kaasi oo u dhexeeyay Ciidanka dowladda Feeraalka iyo dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Dagaalkan ayaa waxaa uu ka dambeeyay sida la sheegay, kadib markii Saraakiil ka tirsan Ciidanka dowladda oo ku sugnaa Shabeellaha Hoose ay socdaal ku aadeen meel uu kasoo jabsaday Webiga Shabeelle, iyagoona doonayay inay soo xiraan, hayeeshee ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka Al-shabaab.
Dadka deegaanka oo la hadlay Warkii Online ayaa u sheegay in Biyaha Webiga Shabeelle lagu furay xaafado ka tirsan Degmada Awdheegle, isla markaana uu sameeyay dad u badan beeraley oo ku dhaqan Xaafadda lagu magacaabo Malable.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in agagaarka laga furay biyaha Webiga Shabeelle laga maqlay qaraxyo miino nooca dhulka lagu aaso ah, kuwaasi oo la tilmaamay in wax Khasaaro uu ka dhalan.
Ilaa iyo hada lama oga Khasaaraha uu geystay dagaalkii xalay Al-shabaab iyo Ciidanka dowladda ku dhexmaray qeybo kamid ah Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleGuddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa si kulul uga hadlay dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday qeybo ka mid ah Gobolka Mudug. Guddoomiye Cawad oo wabaahinta ku hadlay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in wax laga xumado ay tahay dagaal beeleedka kasoo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada Af-barwaaqo ee Gobolka Mudug, kaasi oo sababay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale Guddoomiye Cawad ayaa Guddiga nabadeynta Mudug iyo Ciidanka Xasilinta dowladda ee halkaas ku sugan ugu baaqay inay ku baxaan Codaalada Af-barwaaqo, isla markaana si deg deg u joojiyan dagaalka dhiiga uu ku daatay. AKHRISO Sawirro:-Qoys deganaa Hargeysa oo Guriga kusoo dumay iyo Khasaaro ka dhashay Dec 8, 2019 Ciidanka Dowladda iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay Shabeellaha Hoose Dec 8, 2019 Dhageyso;- Warka Subaxnimo Ee Radio Dalsan Dec 8, 2019 Isaga oo sii hadlaayay ayuu tilmaamay in tallaabo adeg laga qaadi doono dadka sii hurinaya dagaalka kasoo cusboonaaday Gobolka Mudug, wuxuuna Carabka ku dhuftay in dagaalka uu saameyn ku yeeshay dadka deegaanka ku dhaqan halkaas. Ugu dambeyntii Guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka ayaa Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee dalka iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ugu baaqay inay qeyb ka noqdaan xalinta dagaal beeleedyda soo cusboonaaday. Si kastaba dagaalkii ka dhacay deegaano hoostaga degmada Af-barwaaqo ee Gobolka Mudug ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 ruux, halka ay ku dhaawacmeen tirro kale, kuwaasi oo u badan dhinacyadii dagaalamay.
Next articleWasiirro ka tirsan xukuumadda oo maanta hor tagaya golaha shacabka
Guddoomiye Iimaan Cadow Kaarshe oo aad ugu dhow Axmed Madoobe oo...